Izizathu kunye neempembelelo zoQoqo lukaRhulumente
Ukuqhawula uRhulumente: Izizathu kunye neempembelelo
Xa iNgqungquthela ayikwazi ukuvumelana neBhajethi
Kutheni uninzi lwaseburhulumenteni wase-US lugqityiwe kwaye kwenzeka ntoni xa lwenziwa?
Isizathu Sokuvalwa kweRhulumente
Umgaqo-siseko wase-US ufuna ukuba zonke iindleko zeemali zedolophu zigunyazwe yiCongress ngokuvunyelwa nguMongameli wase-United States . Urhulumente waseburhulumenteni wase-US kunye neprogram yohlahlo lwabiwo - mali lusetyenziswe kumjikelezo wonyaka-mali ukususela ngo-Oktobha 1 ukuya phakathi kobusuku boSeptemba 30.
Ukuba iCongress ihluleka ukudlulisa zonke iindleko zenkcitho ezibandakanya uhlahlo lwabiwo-mali lwesigqeba sonyaka okanye "izigqibo eziqhubekayo" ekwandiseni inkcitho ngaphaya kokuphela konyaka-mali; okanye ukuba umongameli akakwazi ukutyikityha okanye i- vetoes nayiphi na enye yezinto ezizithengisayo, ezinye iinkonzo ezingabalulekanga zikaRhulumente zinokunyanzelwa ukuba zipheliswe ngenxa yokungabikho kwemali-mali egunyazisiweyo. Isiphumo kukuvalwa kwekarhulumente.
I-Ghost of Shutdowns edlulileyo
Ukususela ngo-1981, kukho ukuvala ukuvala urhulumente. Ezi zintlanu zokugqibela zokuvalwa kwekarhulumente ziye zazingabonakali ngabani na kodwa abasebenzi baseburhulumenteni bachaphazelekayo. Kodwa ekugqibeleni, abantu baseMerika babelana ngeentlungu.
Ngowe-1981: UMongameli uRagag wanikezela isisombululo esiqhubekayo kunye nabasebenzi baseburhulumenteni abangama-400 000 bathunyelwa ekhaya ngesidlo sasemini baza bathi bangabuyi. Kwiiyure ezimbalwa kamva, uMongameli uReeagan watyikitya inguqulo entsha yesigqibo esiqhubekayo kunye nabasebenzi babuyela emsebenzini ngomso olandelayo.
Ngowe-1984: Akukho bhajethi evunyiweyo, abasebenzi base-federal 500,000 bathunyelwa ekhaya. Ibhajethi yenkcitho yongxamiseko ibuyele kubo bonke emsebenzini ngomhla olandelayo.
Ngo-1990: Ngaphandle kwesabelomali okanye isisombululo esiqhubekayo, urhulumente uyavala ngexesha leentsuku ezintathu zeeColumbus. Uninzi lwabasebenzi basebenzile nantoni na ibhajethi yenkcitho yongxamisekileyo eyayisayinwe nguMongameli Bush ngasekupheleni kweveki yababuyisela emsebenzini emsebenzini ngoLwesibili ekuseni.
Ngo-1995-1996: Ukuvalwa kwezimbini zikaRhulumente eziqala ngomhla kaNovemba 14, 1995, kwakubandakanya imisebenzi eyahlukeneyo yolawulo lolawulo lwamaxesha ngamaxesha ahlukeneyo kude kube ngo-Ephreli ka-1996. Iimbali ezigqithiseleyo zikarhulumente kwimbali yesizwe zibangelwa umonakalo webhajethi phakathi kukaMongameli weDemocratic Alliance uClinton kunye Inkomfa elawulwa yiRiphabhuliki ejongene nezimali kwi-Medicare, imfundo, imo, kunye nempilo yoluntu.
Ngowe- 2013: Kwiintsuku ezili-17 ezithandekayo, ukususela ngo-Oktobha 1 ukuya ku-Oktobha 16, ukungavumelani okungapheliyo phakathi kwamaRiphablikhi kunye namaDemokhrasi kwiNgqungquthela yokuchitha imali ngokunyanzeliswa kwamalungu angama-800,000 aseburhulumenteni, amaqhawe ase-US avaliwe kwiimemori zabo zemfazwe kunye nezigidi Iindwendwe ziphoqeleke ukuba zihambe kwiipaki zesizwe.
Ayikwazi ukugqithisa uhlahlo lwabiwo-mali lwangonyaka , iCongress ithathwa njengesisombululo esiqhubekayo (CR) esiya kugcina inkxaso-mali kumanqanaba angoku kwiinyanga ezintandathu. KwiNdlu, i-Tea Party yamaRephabliki idibanise izilungiso kwi-CR eziza kubambezela ukuphunyezwa komthetho kaMongameli Obama wokulungiswa kwempilo - U-Obamacare - unyaka owodwa. Oku kulungiswa kweR CR kwakungekho nethuba lokudlula kwi-Senate elawulwa yi-Democrat. I-Senate ithumele iNdlu "icocekileyo" kwiC CR kungekho zilungiso, kodwa uSomlomo weNdlu uJohn Boehner wenqaba ukuvumela iR CR ecocekileyo ukuba ivotelwe kwiNdlu. Ngenxa yesigxina kwi-Obamacare, akukho mali i-CR yadluliselwa ngo-Oktobha 1-ekupheleni konyaka-mali ka-2013 we-rhu lumente-kwaye ukuvalwa kwaqala.
Njengoko isicatshulwa sokuvala, ukubonwa koluntu ngamaRiphabliki, uMdemokhrasi noMongameli Obama baqala ukuhlawulela kwaye, ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, i-US yayisetyenziselwe ukufikelela kumda wetyala layo ngo-Oktobha 17. Ukungaphumeleli komthetho ukuphakamisa umda wesikweletu ngomhla wokugqibela unyanzelekile urhulumente ukuba ahlawule ityala lakhe okokuqala ngqa kwimbali, ukubeka intlawulo yeenzuzo zentlangano engozini yokulibaziseka .
Ngo-Oktobha 16, Ejongene neengxaki zemingeni kunye nokwenyuka kweentlanga kunye neCongress, iiRiphabhlikhi kunye namaDemokhrasi ekugqibeleni bavumelana kwaye baphumelela i-bill ngokukhawuleza ukuvula kwakhona urhulumente kunye nokwandisa umda wetyala. Okumangalisa kukuba, i-bill-eqhutyelwa yimfuno yurhulumente yokunciphisa imali-ichithe izigidigidi zeedola, kuquka nesipho esingenasiphoso se-$ 174,000 kumhlolokazi we-Senator ofileyo.
Iindleko zoQoqo lukaRhulumente
Ukuqala kokuvalwa kwezikarhulumente zombini ngo-1995-1996 kwaphela iintsuku ezintandathu kuphela, ukususela ngoNovemba 14 ukuya kuNovemba 20. Emva kokuvalwa kweentsuku ezintandathu, ulawulo lukaClinton lwakhupha uqikelelo lweentsuku ezithandathu zeburhulumenteni obumbene.
Iingxowankulu ezilahlekileyo: Ukuvalwa kweentsuku ezintandathu kuhlawula abakhokhi berhafu malunga neerandi ezingama-800 ezigidi, kubandakanywa iidola ezingama-400 kwizigidi zabasebenzi abasemagunyeni abahlawulwayo, kodwa abazange baxelele ukusebenza kunye nezinye iirandi ezingama-400 kwiingeniso ezilahlekileyo kwimihla emine ukuba ii-IRS zokuthotyelwa kwamagatya zivaliwe.
I-Medicare: Abangama-400,000 abatsha abafumana i-Medicare abamkelekileyo bayalibaziseka ekufakeni isicelo kwiprogram.
Ukhuselo Loluntu: Amabango avela ku-112,000 abatsha-sicelo bezoKhuseleko beNtlalo abazange baphenywe. Amakhadi amatsha angama-212,000 okanye atshintshwe kwi-Social Security amakhadi awazange akhutshwe. Iindwendwe zee-360,000 zavalwa. Iifowuni ezingama-800,000 zamahhala ezingenasiphelo zengcaciso ayiphenduliwe.
Unonophelo lwezonyango: Izigulane ezintsha azizange zamukelwe kuphando lwezonyango kwiziko leZiko lezeMpilo leSizwe (NIH). Amaziko okuLawula nokuLawulwa kwezifo ayeke ukupheliswa kwezifo kunye neefowuni ze-hotline kwi-NIH ngezifo aziphendulwanga.
Ingqongileyo: Umsebenzi ococekileyo wokucoceka kwimihlaba kwiindawo ezingama-609 wagqalwa njengabasebenzi abayi-2,400 abathunyelwa kwi-Superfund.
Ukunyanzeliswa komthetho kunye noKhuseleko loLuntu: Ukulahla kwenzeka kwiinkqubo zotywala, ucuba, izibhamu kunye nezixhobo zokuqhuma i-Bureau of Alcohol, Ugwayi kunye neMipuphu; basebenze kwiimeko ezingaphezu kwama-3 500 eziqhoxiswayo ezixeliweyo zixelwe; Ukukhansela ukuqeshwa kunye nokuvavanywa kwamagosa okunyanzeliswa komthetho okwenzekayo, kubandakanywa ukuqeshwa kwamagosa angama-400 okujikeleza umda; kunye neengxaki zokuxhaswa kwabantwana zilibalekile.
Amanqatha ase-US: Iinkonzo ezininzi zezilwanyana zapheliswa, ezivela kwimpilo kunye nentlalontle yokufumana imali kunye nokuhamba.
Ukuhamba: Izicelo zepasipoti ezingama- 80 000 zilibalekile. Ama-visa angama-80 000 aphuculwa. Ukuhlehliswa kwesiphumo okanye ukukhanselwa kweendleko zokuhamba ngeendleko ze-US kunye neeerandi ezigidi zeedola.
IiPaki zeSizwe: iindwendwe ezi-2 ezivakatyekayo ziphendukile kwiipaki zesizwe eziza kubakho ukulahlekelwa kwezigidi kwiingeniso.
Iimali ezixhaswa nguRhulumente: Imali-mboleko ye- FHA yokubolekwa kwemali exabisa imali engaphezu kwe-800 yezigidi ukuya kwii-10 zeentsapho ezisebenzayo ezingaphantsi kwemilinganiselo.
Indlela ukuvala uRhulumente kungakuchaphazela njani
Njengoko ilawulwa yi-Ofisi yoLawulo kunye neBhajethi (i-OMB), ii-arhente zombuso ngoku zigcina izicwangciso zengqungquthela yokujongana nokuvalwa kwekarhulumente.
Ukugxininiswa kwezi zicwangciso kukuqinisekisa ukuba yeyiphi imisebenzi ekufuneka iqhubeke. Okubaluleke kakhulu, iSebe lezokuKhuseleko lwaseKhaya kunye noLawulo lwaKhuseleko loThutho (TSA) aluzange lukho ngo-1995 xa kuqukunjelwa ukuvalwa kombuso kwexesha elide. Ngenxa yobukhulu bomsebenzi wabo, kunokwenzeka ukuba i-TSA iya kuqhubeka isebenza ngokuqhelekileyo ngexesha lokuvalwa kombuso.
Ngokusekelwe kwimbali, nantsi indlela yokuvalwa kwexesha elide likarhulumente kunokuchaphazela ezinye iinkonzo zikaRhulumente ezibonelelwe ngurhulumente.
Ukhuseleko Lentlalo: Ukuhlolwa kweenzuzo kuya kuhlala kuzayo, kodwa akukho zicelo ezintsha eziza kwamkelwa okanye zenziwe.
Ingeniso yerhafu: I-IRS iya kusenza ikwazi ukuyeka ukubuyiswa kweerhafu zephepha kunye nokubuyisela imali.
I-Patrol Border : Imisebenzi yamatyala kunye neBorder Patrol iya kuqhubeka iqhubeka.
Inhlalakahle: Kwakhona, ukuhloliswa kuya kuqhubeka, kodwa izicelo ezintsha zeSitampu zoKutya zingenakwenziwa.
Imeyili: I- US Postal Service iyayigcina, ngoko ke ukuthunyelwa ngeposi kuza kuqhubeka njengesiqhelo.
Ukhuselo lweSizwe: Wonke amalungu asebenzayo kuwo onke amasebe azo zonke iinkonzo ezixhobileyo aya kuqhuba umsebenzi njengesiqhelo, kodwa angenakho ukuhlawulwa ngexesha. Ingaphezulu kwesigamu seSebe lezoKhuseleko labasebenzi abangama-860 000 + baya kusebenza, abanye bathumela ekhaya.
Inkqubo Yobulungisa: Inkundla ze-Federal kufuneka zihlale zivulekile. Izigwenxa ziya kuxoshwa, zibanjwe, zishutshwe kwaye ziphonswe kwiintolongo zaseburhulumenteni, eziya kusetyenziswa.
Iifama / i-USDA: Ukuhlolwa kokutya kokutya kuya kuqhubeka, kodwa ukuphuhliswa kwendawo yasemaphandleni, kunye neeprogram zeentengo zemboleko kunye nokubolekwa kwemali mboleko kuya kusondela.
Izithuthi: Ulawulo lwezithuthi zomoya, abasebenzi be-TSA ukhuseleko kunye noLondolozo lweNxweme baya kuhlala emsebenzini. Izicelo zeepaspoti kunye nee-visa zingenakucutshungulwa.
IiPaki zeSizwe / uKhenketho: Iipaki kunye namahlathi kuya kusondela kwaye iindwendwe zixelelwe ukuba zihambe. Amaziko okuvakashela kunye nokutolika aya kuvalwa. Iinkonzo zokuncedisa kunye nezokuphepha zomlilo zingazivali. Izikhumbuzo zeSizwe kunye neendawo ezininzi zembali ziza kuvalwa. Ipolisa yamapolisa ngokuqinisekileyo iyaqhubeka nokuqhuba iiproloji.
Okumangalisayo (Abasetyhini) Imbali yoSuku lweSikhumbuzo
I-49ers ne-California Gold Rush
Iiprogram ezitsha zoTshintsho lweNtsha ziqhubeka zisasebenza namhlanje
Iqela leMidlalo yokuLinga
7 AbaMnyama bezeNdalo abaMnyama abenza ukwahlukana
Intshumayelo yokuqala yeBuddha
UPapa uJoan: Ngaba ngokwenene kwakukho uPapa ongumfazi?
Ukukhusela i-Bias Teachers and Believes Beliefs
Ixesha lokusebenzisa iSigqeba kunye ne "Pending que"
I-Quiz yokufunda: 'Izindlela ezimbini zokubona uMlambo' nguMark Twain
Funda Ngeentlobo zePing-Pong Paddles
Ngaba uYesu Unabo Bazalwana Nabodade?
Yintoni eyenzekayo xa Udibanisa rhoqo i-Oil and Synthetic Oil Oil?
Iingcaphuno zoKhuthaza ootitshala